Donald Trump Oo Hub Qiimihiisu Yahay 8 Bilyan Ka Iibanaya Sacuudiga – somalilandtoday.com
Donald Trump Oo Hub Qiimihiisu Yahay 8 Bilyan Ka Iibanaya Sacuudiga
(SLT-Washington)-Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa fasaxay in hub qiimihiisu yahay balaayiin doolar laga iibiyo Sucuudiga, waxaanu ku sababeeyey khatarta kaga iman karta dalka ay colaadda guunka ahi dhextaal ee Iran.
Maxaa keenay xiisaddan Iran?
Xiisadda dhex taal Maraykanka iyo Iran waxay sii korodhay bishan markii Washington sheegtay in cunoqabataynta lagu darayo dalalka weli saliidda ka iibsada Iran. Go’aankaas oo loola dan leeyahay in dhoofinta saliidda Iran lagu joojiyo si xukuumaddu u weydo dakhli uga soo xarooda isha keliya ee dakhligu ka soo galo.
Trump ayaa sannadkii hore cunaqabatayntii ku soo celiyey Iran ka dib markii uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee ay Iran kala saxeexdeen lixda dal ee shan ka mid ahi xubnaha joogtada ah ka yihiin Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo Jarmalka. Waana taas ta cirka ku sii shareertay xiisaddu.
Afar markab oo kuwa saliidda qaada ah ayaa lagu wax yeelleeyay dhacdo Imaaraadku ku sheegay weerarro curyaamin ah, sidoo kalena waxa laba goobood oo Shidaalka laga dhoofiyo oo Sucuudigu leeyahay ay fallaagad Xuutiyiinta Yemen, oo ay Iran taageertaa, ku weerareen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Waxaany taasi kalliftay in dhuumaha la xidho muddo kooban.
Iran way beenisay in ay ka dambaysay dhacdooyinkaa hase yeeshee Admiral Micheal Gilday oo ah madaxa taliska guud ee ciidamda Maraykanka ayaa ku eedeeyey ciidamada ilaalada kacaanka Iran in ay toos uga masuul yihiin dhacdooyinkaas.